Astaamaha David Nicholson
Kadib baaris qaran oo ballaaran, hay’ada McKnight ayaa u magacowday David Nicholson sida Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah (V&EC) agaasimaha barnaamijka. Nicholson wuxuu keenayaa in kabadan 30 sano oo hogaaminta ah ee samafalka ah, dowlada, iyo samafalka, ee ugu dambeeyay Headwaters Foundation Caddaaladda. Wuxuu ku biirayaa aasaaska daqiiqad muhiim ah, sida aan horay ugu marineyno barnaamijka V&EC hadaf u dhisaan mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
“Sida McKnight u dhaqaaqeyso hirgelinta barnaamijka cusub ee Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta, iyadoo lagu jiro masiibo caalami ah iyo saameynta sii socota ee midab-kala sooca habbeysan, waxaa naloo xusuusinayaa sababta ay Minnesota iyo McKnight ay ugu baahan yihiin inay si adag uga shaqeeyaan sidii ay gobolkeennu u noqon lahaa mid firfircoon oo loo wada sinnaado,” ayay tiri Pamela Wheelock, madaxweynaha ku-meel-gaarka ah. “Daa’uud waa hogaamiye khibrad leh oo leh guulo la taaban karo ee dhaqdhaqaaqa abaabulka iyo abuurista nidaamyo macno leh. Waxaan qiimeyneynaa aqoontiisa qotada dheer ee Minnesota iyo baahiyaha kala duwan iyo caqabadaha bulshooyinkayaga, iyo sida ay uga go'an tahay sinnaanta isirka. ”
Laga bilaabo Sebtember 8, Nicholson wuxuu hogaamin doonaa barnaamijka V&EC maaddaama ay bilaabaneyso deyrtan. Kaalintiisa wuxuu abuuri doonaa oo uu sii wadi doonaa barnaamij isku dhafan, isku dhafan oo barnaamijyo ah oo lagu taageerayo dhisidda Minnesota oo aad u caddaalad badan oo loo dhan yahay. Wadashaqayn dhaw oo lala yeesho hoggaamiyeyaasha sare ee McKnight, oo uu ku jiro kuxigeenka barnaamijyada Kara Inae Carlisle, wuxuu ku fulin doonaa aragtida shaqaalaha V&EC: Sarah Hernandez iyo Eric Muschler, saraakiisha barnaamijka; Erin Imon Gavin, maamulaha is dhexgalka barnaamijka iyo sarkaalka barnaamijka; iyo Renee Richie, barnaamijka iyo deeqaha lashaqeeyo.
"Waxaan qiimeyneynaa aqoonta qoto dheer ee David ee Minnesota iyo baahiyaha kala duwan iyo caqabadaha bulshooyinkayaga, iyo sida ay uga go'antahay sinaanta midabka." —PAMELA WHEELOCK, MADAXWEYNE INTERIM
Xirfadle wuxuu diirada saaray hogaaminta bulshada iyo isbedelka bulshada ee nidaamsan
Saddexdii sano ee la soo dhaafay, Nicholson wuxuu ka shaqeeyey abuurista isbeddel nidaam ah iyada oo loo marayo hoggaanka bulshada iyo dhisidda dhaqdhaqaaqa bulshada Wuxuu ku soo shaqeeyay doorarka hogaaminta tiro dhowr ah oo aan macaash doon aheyn iyo iskaashatooyin tabaruc ah.
Isaga oo ah agaasimaha fulinta ilaa 2013 ee aasaasaha madaxa cadaalada madaxbanaan ee cadaaladda, aasaasiga bulshada ee Minnesota ee aasaasiga ah ee bulshada, wuxuu diiradda saaray sidii loo dhisi lahaa dimoqraadiyadda ay dadku awood u leeyihiin iyo helida dhibco isugeyn ah oo dhexmara kooxaha iyo danaha kala duwan. Wuxuu soo bandhigay Mashruuca Bixinta Minnesota gudaheeda, waa moodal tabaruc ah oo cusub oo keenaya kooxo kala jaad ah, kooxo dad kala jaad ah oo ka wada socda sidii ay uga qaybqaadan lahaayeen deeqaha bulshada ku saleysan.
Iyada oo loo marayo mashruucan, oo diiradda saarey xalalka muddada fog ee caddaaladda iyo sinnaanta guud ahaan gobolka, Nicholson wuxuu keenay kala duwanaansho, sinnaan, iyo ku darid safka hore ee barnaamijka 'Headwaters'.
Sidoo kale Headwaters, markii uu ahaa agaasimaha barnaamijka, Nicholson wuxuu dhistay oo maareeyay barnaamijyo deeq-bixinno hal abuur leh oo diiradda lagu saaray caddaaladda deegaanka iyo dhismaha bulshada ee bulshooyinka Asalka ah. Mid ka mid ah barnaamijyada noocaas ah wuxuu abuuray $2 milyan oo hadiyad ah oo beddelay hoggaanka-hagitaan-hagitaan ee jaaliyadaha asalka ah ee ku baahsan gobolka oo u horseeday isbeddelo muhiim ah siyaasadaha deegaanka iyo bulshada ee Minnesota iyo Wisconsin.
Hore shaqadiisa, Nicholson wuxuu u shaqeeyey agaasimaha barnaamijyada Ain Dah Yung (Xaruntayaga), xarun ku saleysan dhaqano ku saleysan dhaqan oo u adeega qoysaska asaliga ah iyo dhalinyarada. Ka dib shan sano ayuu ku qaatay siyaasadaha farshaxanka dawladda dhexe agaasimaha Sanduuqa Aasaasiga ee Carruurta, waa barnaamij lala kaashanayo bulshada maxalliga ah si loo joojiyo xadgudubka carruurta.
Wuxuu ka soo shaqeeyey goleyaal aan macaash doon ahayn in ka badan 20 sano, 10 ka mid ahna waxay ahaayeen doorarka hoggaanka guddiga. Wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyey guddiyada samafalka qaranka, gaar ahaan kuwa Isweydaarsiga Maalgelinta, kaas oo ahaa iskaashi qaran oo ka kooban 17 asaas oo cadaalada bulshada ah.
Nicholson ayaa yidhi: "Aad ayaan ujeclahay ugana go'ay inaan dhiso Minnesota ka fiican, taasna waxay igu kaliftay inaan doorkan ka qaato McKnight," ayuu yidhi Nicholson. "Waxaan rajeynayaa inaan ku biiro barashada ka soo baxda shaqada sannadihii dheer ee McKnight ee bulshada dhexdeeda iyo la shaqeynta asxaabteyda iyo xubnaha bulshada si aan u abuuro cadaalad, ka wada qaybqaadasho, iyo cadaalad Minnesota."
Shaqooyinka Nicholson waxay xarumahooda u badalaan awooda dadka si ay u abuuraan, xalliyaan, ugana adkaadaan arrimaha ugu nugul ee sinnaan la'aanta, sinnaanta jinsiyadda, ka saarista bulshada, iyo dimoqraadiyadda. Isaga oo ka soo jeeda miyiga Minnesota, wuxuu hadda ugu yeeraa Minneapolis hoy. Isagu waa aabaha aaminka ah ee laba carruur ah oo waaweyn, Madeline iyo Benyaamiin.
Iyada oo taageero laga helayo la-hawlgalayaasha iyo hoggaamiyeyaasha bulshada, ayaa McKnight dhammeystirey si deg-deg ah geedi socodka fikirka bulshada dayrtii la soo dhaafay, iyo guddidu dhowaan waxay meel mariyeen dariiqa loo maro dhameystirka xeeladaha barnaamijka cusub. Mu'asasada ayaa hada shaqeyneysa barnaamijka waxayna si cad ugu dhawaaqi doontaa tilmaamaha barnaamijka dayrta 2020.
Mu'asasada 'McKnight Foundation', oo ah aasaaska qoyska ee fadhigoodu yahay Minnesota, ayaa horumariya cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u badan oo dadka iyo meeraha ay ku najaxaan. Waxaan si qoto dheer uga go'an nahay in aan horumarino xalalka cimilada, dhisidda Minnesota firfircoon oo caddaalad ah, iyo taageerista fanka Minnesota, neerfaha, cilmi baarista dalagga caalamiga, iyo adkeysiga miyiga.
Kalfadhiga Macluumaadka Bulshooyinka Firfircoon & Sinnaanta Diseembar 10